March 2, 2015 – democracy for burma
#PRESIDENT #THEIN #SEIN #MET #NLD #AUNG #SAN #SUUKYI
On March 2, 2015 March 2, 2015 By Burma Myanmar newsIn Burma, MYANMAR, NLDLeaveacomment
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ဆုံ ဧရာဝတီ၊ မတ် ၂၊၂၀၁၅ President Thein Sein and NLD CHAIRMAN Aung San Suu Kyi met today- Two meeting since the constitutional amendment, free and fair election…
နုိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဒီနေ့ ညနေ ခြောက်နာရီက နေပြည်တော်မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
နှစ်ဦးတည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး၊ လွတ် လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနုိုင်ရေးတို့နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆွေးနွေးခဲ့ ကြောင်း အသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။
On March 2, 2015 March 2, 2015 By Burma Myanmar newsIn Burma, MYANMAR, STUDENT MARCHLeaveacomment
၈။ ထိုသို့ ရန်ကုန် သွားရာတွင် လုံခြုံရေးကားများ လိုက်ပါခြင်းကို လက်ခံသည်။ သို့သော် ရှေ့ပြေးယာဉ် ခပ်ခွာခွာ နှင့် နောက်မှ လုံခြုံရေးကား များ ခပ်ခွာခွာ လိုက်ရန် တို့ ဖြစ်ပါသည်။ Continue reading “#ဗကသပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်းမှ #၏စာမေးပွဲကိုရှေးရှု၍အစိုးရထံအချက်” →
#WHITE #ELEPHANT #CAPTURED #BURMA #MYANMAR
On March 2, 2015 March 2, 2015 By Burma Myanmar newsIn Burma, MYANMAR, WHITE ELEPHANTLeaveacomment
27/2/2015 A rare white elephant has been captured after it was discovered roaming wild inajungle in Burma. The seven-year-old female elephant was captured by forestry officials six weeks after it was spotted atareserve in the western Ayeyarwaddy region. The cow is about7years and 1.9 meters high. Ninth white elephant emerges in Pathein Township
#mm #Burma #Photo #News: #Police #Blocks #Students’ #Camp in #Letpadaung
On March 2, 2015 March 2, 2015 By Burma Myanmar newsIn UncategorizedLeaveacomment
. Police Blocks Students’ Camp in Letpadaung to prevent them to march yangon. About 500 heavily armed police forces seen around temple. photocr.Kamayut Media (ဓာတ်ပုံ – ဆန်းမင်းဦး/ကမာရွတ်မီဒီယာ) လက်ပံတန်းမြို့ရှိ ပင်မကျောင်းသားသပိတ်စစ်ကြောင်းကို သက်ဆိုင်ရာက တားဆီး ပြည်ခရိုင်နှင့်မန္တလေးရဲဘော်များ၊ ပိတ်ပင်ထားသောအတားအဆီးများ ကိုကျော်ပြီးအောင်မြေဗိမာန်ကျောင်း သို့အေးချမ်းစွာရောက်ရှိလာပါပြီ photocr.Ko Min Zaw
#ကိုအောင်နေမျိုး #ပြန်လွတ်ပါပြီ။ #myanmar #breaking #news #reporter #nay #myo #released
On March 2, 2015 By Burma Myanmar newsIn Burma, MYANMAR, NAY MYO, RELEASEDLeaveacomment
ကိုအောင်နေမျိုး ပြန်လွတ်ပါပြီ။- AUNG NAY MYORELEASED FORM PRISON photocr. susu nway
On March 2, 2015 March 2, 2015 By Burma Myanmar newsIn Burma, MNDAA, MYANMARLeaveacomment